ODUU DURII OROMOO - Ayyaantuu News
ODUU DURII OROMOO Beekan Gulummaa Irranaa | Fulbaana 20, 2013
3. Harreen waraabessaan waliin firummaa akka hin qabne otoo beektuu mucaan waraabuu du’uu dhageenyaan ilmoon akkuma ofiitii, du’a gayii geenyu malee jechuudhaan ijoollee ishii dhiphisuun otoo itti himanuu dirqisiiftee gara du’a gayiitti naxalaa kuula ol-dachaasatanii qajeelan. Ijoolleen harree tarkaanfii haadha isaaniitti aaran kun karaatti akkam gochuun isaan irra akka jiru yaadaa dhaqan. Akka waraabessi garaa isaanii hin lafne beekkatanii tooftaa ittiin waraabessicha harkaas bayan haadha isaaniis gammachiisan soqaa achi gayan.
Akkuma kara seenaniinis hoomaa waraabessaa du’a gahii taa’u yeroo argan gurra isaanii qaruun dhaabanii haadha isaanii hordofuun mana naanna’anii booyuutti ka’an.
Maaltu nyaate mucaa keessanii?…
jedhanii dallaa naanna’anii yeroo isaan kutan, haati Harree garuu waa otoo hin kenniin akkamittan deema jettee deebitee teessee yaaduutti kaate. Sabbatatti waa gudunffattee hin dhufne; sabbtumaa hin qabdu. Haa ta’u iyyuu malee teessee iti yaaddee eegeedhamoo hidhii kenuu akka wayyu yoo mari’achuuf of-cinaa laaltu ijoolleen ishii hin jiran. Hidhiin kennee deema” jettee. Warrakoo jabaadhaa abbaan mucaa as-bayii hidhii kiyya gara olii suuta jedhii kutadhu” ittiin jette.
Waraabessis kana gammadee, hidhii harree gamaddalatee, yeroo ishiin baatee qajeeltu, haadhoo harree mee as garagali jedhaniin.Yeroo kana ilkaan ishii irra keessaa qullaadha; waan kofaltu fakkaatti.Waroonis, ilmoodhuma hundaatu du’aa, kan ilmoo keenyaa maaf kolfa ta’ee? jechuun itti dirrisee garaa ishii jigse. Tolli akkasitti ishiidhaaf deebi’e.
23 comments - What do you think? Posted by admin - 20/09/2013 at 11:08 am Categories:
23 Responses to “ODUU DURII OROMOO”
the Oromian bateleur ykn Risaa Oromiyaa says:	20/09/2013 at 11:52 am	Beekan Gulummaa
Shekoon ati barreesite hedduu garii dha, isa dur yeroo ijoollummaa koo na yaadachiise. Haa ta’u malee, akka ati yeroo adda addaati barroolee adda addaa barresites immoo karaa adda addaa dhaga’een ture, hedduu galatomi. Sichi kana caalaas immoo akka gadi yaa’an nan abdadha.
Boonsaa says:	20/09/2013 at 1:43 pm	Galatoom
Teshome says:	20/09/2013 at 10:52 pm	Guddaa galatooma Dr.Beekan!! Ani qaaman sin beeku badhuus hojii keessan baayyeen dinqisifadhaa.keessatu kitaabon kee isaan GUUBOO SEENAA FI LOOKOO JAALALAA baayyee natti tolu.jajjabadhuu!! Isin jaallanna!!
Geti Keno says:	02/05/2015 at 12:14 am	Baayyee Galatoomii Bayyee Garraamii Ta’uun Egaa Kana Fida Haxxummaan Illee Barbachisadha. Thank U Itti Fufii
Hordofaa Sabaa says:	21/09/2013 at 4:29 am	Durii duriin kun dhaamsa guddaa qabaa waan akkasii kana jabaadhaa nuuf barreeysaa galata qabduu.
Gara laafinni Harree gara laafina Oromootiin walfakkaata.kuammoo haalaan gaaga’ama guddaa lubbuu isii gaafate.
Qarummaan Ijoollee Harree Qarummaa Ilmaan Oromoo kan Dhaleeta Qubee Ilmaan Oromootiin wal fakkaata waan taheef Ijoolleen keenya Seenaa dabre jijjiiruu irratti qooda guddaa qaban.akka warra dabreetti Gabrummaa baatanii taa’uun ammaan booda hin eegamu waan taheef Dhaloonni Qubee garmaamee mooraa diinaatiin marsee gehe gabrummaan,kana booda harka kee seennee hin nyaadhamnu jechuun falmatuudha.
Girma Biratu Gamada says:	23/10/2013 at 11:08 am	Qaamaan kanan jimmaatti sibeeku caalaa anaadhufu irratti baay’ee si hubadheera. Akkuma jette jirta! Jabaadhu itti nuu fufi si booda jirraa…
wesene says:	18/11/2013 at 10:49 am	baayee namatti tolaa asuummanii itti fuufi gaalatomi
alAbabu says:	07/12/2013 at 3:30 am	Baaye namati tolaa jabadhu!!!
kedir says:	09/12/2013 at 10:22 pm	Gaalt gudda argadhu
dame says:	04/01/2014 at 12:45 am	bay.ee garii dha itti nu fufa
jaafarrooba says:	04/01/2014 at 4:29 am	kan boroos nu barsiisa galatooma
jaafarmahammaed says:	21/06/2015 at 6:54 am	baayee namati tolaa kan kan fakatuus nuf bareesa
lelise says:	04/02/2014 at 5:22 am	Maloo kan Koo kun sinumaa biraa gahuu didee moo gafiin Koo moo akumaa Koo sin dhibee lataa? accunt dhumaan banachuun Walalee duraa biyya yeroon jiruu naaf hojatani debi’eet new account naa gafaatee fecebook banachudhaf maloo naaf deebisa adaraa waqayyoon sinin jedhaa maqan Koo lelise gudisaan jedhamaa kanan baradhee hangaa kutaa afuriti kanaaf naa dhibee
lelise says:	04/02/2014 at 5:25 am	dhifamaa dogongoraa qubee wanan qabuf dhifaman siin gafaadhaa
Abdunasir mohamed says:	17/02/2014 at 11:04 am	Yaa ummata keenya jabaadha
gamachis says:	30/08/2014 at 9:22 am	hagaa dhaga’ii bilisumaa argadhuu.
Walaabu says:	19/10/2014 at 2:38 pm	Baay’ee nu
Walaabu says:	19/10/2014 at 2:40 pm	Baga wal arganne
Daawit Galataa says:	21/05/2015 at 6:37 pm	lubbu nuuf dheeradhu sabboontu keenya
Fayisaa Gammachuu says:	03/08/2015 at 3:14 am	Jiraadhu Beekaa keenyaa, adeemsa jireenya heeddu nama hubachiisa, galata ani iniif qabu guddaa dha.
Tajuu Hassan says:	04/08/2015 at 2:01 pm	jabaadha ilman oromo guddina afaan oromotif gummachi keessan guddadha
Keraj says:	17/09/2015 at 12:55 am	Hedduu galatooma natti toleraa!
tolosa says:	22/10/2015 at 9:11 am	yoo nuti hojjanne malee namu nuuf hin hojjatu jabaadha
ilmaan oromoo! aadaafi afaan keenya yaa guddifnu!